သင်္ကြန်ပြန်မယ့် မြန်မာလုပ်သားတွေ သတ်မှတ်ရက်ကျော်လည်း ထိုင်းဗီဇာကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ်
သင်္ကြန်ပြန်မယ့် မြန်မာလုပ်သားတွေ သတ်မှတ်ရက်ကျော်လ...
11 เม.ย. 2562 - 20:42 น.
သင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလ ပိတ်ရက်ရှည်ရပြီးလို့ ပြန်လာကြမယ့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက် အနည်းငယ် ကျော်လွန်ပြီး ပြန်လာချိန်မှာလည်း ဗီဇာကြေး ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးမယ်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
" ဒီနေ့ပဲ အသိပေးတာ၊ ပုံမှန် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ရက် ဧပြီ ၅ ရက် ကနေ ဧပြီ ၃၀ ရက် အထိ ဗီဇာကြေး (Entry Visa) မယူဘူး၊ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထားသလို အကြောင်းကိစ္စ ရှိလို့ နောက်ကျရင်လည်း ထိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေကို သတင်းပေးပို့ပါ၊ ဒါဆိုရင် ရက်ကျော်လည်း ဗီဇာကြေး ကင်းလွတ်ပေးမယ် ပြောပါတယ်" လို့ မဲဆောက်မြို့မှာ နေထိုင်တဲ့ ဦးအောင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
သင်္ကြန် ပိတ်ရက်ရှည်ကာလ နေရပ်ပြန်မယ့် မြန်မာလုပ်သားတွေ အနေနဲ့ နယ်စပ်ဂိတ် အဝင်အထွက် တွေမှာ ဘယ်လိုငွေကြေးကိုမှ ပေးဆောင်ဖို့ မလိုဘူးလို့ ထိုင်းနိုင်ငံ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာနက တရားဝင် အသိပေးထား ပါတယ်။
ပုံမှန် အချိန်မှာတော့ ထိုင်းဘက်ကို အလုပ် သွားလုပ်ကြသူတွေဟာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဗီဇာကြေးအနေနဲ့ အသွား ဘတ် ၁၂၀၀ အပြန် ဘတ် ၁၂၀၀ ပေးဆောင်ရတယ်လို့ ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ကူညီပေး နေသူတွေက ပြောပါတယ်။
" အသွားအပြန် ဗီဇာကြေးဆို ဘတ် ၂၄၀၀ သက်သာတော့ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၁ သိန်းကျော်ပဲ၊ ရွာရောက်ရင် သင်္ကြန်မှာ စတုဒီသာအလှူ ပြန်လုပ်လို့ ရတယ်" လို့ ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင်ကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မမော်မော်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာ အလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်-မြဝတီ ဂိတ် တံတားပေါ်ကနေ၊ ကူးတို့ဆိပ် တွေကနေ ပြန်လာကြတာ များတယ်လို့ မဲဆောက်မြို့မှာ မြန်မာ အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဦးမိုးကြိုးက ပြောပါတယ်။
ဧပြီ ၅ ရက် ကနေ ဒီကနေ့ အထိ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေ ပြန်လာကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ဦးရေဟာ ၁ သိန်း ကျော် ရှိပြီလို့ အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်ပေးသူတွေက ပြောပါတယ်။
သင်္ကြန်ပွဲတော် ကာလမှာ မြန်မာဘက်ကို အလည်ပြန်ကြမယ့် အလုပ်သမားဦးရေ ၂ သိန်း လောက် ရှိမယ်လို့ ထိုင်း အစိုးရက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
သင်္ကြန်ပွဲတော် ကာလအပြီး မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင်တွေကို ပြန်လာကြမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဧပြီ ၂၀ ရက်က စပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားကြဖို့ ထိုင်းနယ်စပ်တာဝန်ရှိသူတွေကို ထိုင်းအုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်တွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားဝင်ရော၊ တရားမဝင်ရော သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ဦးရေဟာ ၃ သန်း ကျော် ရှိနေပြီလို့ မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူတွေက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ သင်္ကြန်ပြန်မယ့် မြန်မာလုပ်သားတွေ သတ်မှတ်ရက်ကျော်လည်း ထိုင်းဗီဇာကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ်